Homeसमाचारभद्रगोल बाट चर्चा क’माएकी अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै !
April 8, 2021 admin समाचार 6170
हाँस्य टेलसि’रियल भद्रगोल र सक्कीगो नी बाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्ने तया’रीमा छिन् । लामो समय देखि हाँस्य टेलसिरियल र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकी रक्षा गर्भवती भएकै कारण कला’कारिताबाट ब्रेक लिने बताइएको छ ।
अघि’सम्मकी ‘मोडल रक्षा श्रेष्ठ’ अहिले ‘भद्रगोलकी रक्षा’को नामले परिचित छन् । विगत डेढ वर्षदेखि हास्य टेलिशृं’खला भद्रगोलमा आवद्ध भएपछि उनको परिचय फेरिएको हो । परिचय मात्र फेरिएको छैन, उनको चर्चा पनि चु’लिएको छ । हुन त भद्रगोलमा आउनुअघि उनले दुई दर्जनभन्दा बढी विज्ञापनमा मोडलिङ ग’रिसकेका थिइन् भने केही म्युजिक भिडियो र र्याम मोड’लिङमा पनि उनको जादु चलेको थियो ।
उनी अब पुनः प्रशा’रण हुन लागेको ‘सक्किगो नि’ मा नदेखिन सक्ने बताइएको छ । सुटुक्क विबाह गरेकी रक्षा आमा बन्न लागेको कुरा हालै एक युट्युव अन्तरवार्तामा सक्की’गो नी टिमले खुलाएका थिए ।
करिब १ सय भन्दा बढी म्यूजिक भि’डियोमा अभिनय गरिसकेकी रक्षाले ६५ भन्दा बढी वि’ज्ञापनमा अभिनय गरेकी छिन् । हाँस्यसिरियल सक्कीगो नी मा पनि रक्षा र जिग्रीको जोडी’लाई दर्शकले निकै मनपराएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्: बलि’उडका चर्चित अभिनेता हुन् शाहरुख खान । सय करोड पारिश्रमिक लिएर चर्चामा आउने उनी बलि’उडै धनी अभिनेतामा गनिन्छन् । श्रीमति गौरी खानसँग बिहे गरेका शाहरुखले गौरीला’ई अत्यन्तै माया गर्छन् । बलिउडमा यो जोडीलाई नमुना र अब्बल जोडीको रुपमा लिइन्छ । शाह’रुखसँगै उनकी श्रीमति गौरी खान फिल्म निर्माता तथा डिजाइनर हुन् ।
उनी कमा’इको मामलामा शाहरुख भन्दा कम छैन । शाहरुख भारतको सबैभन्दा महंगो अभिनेता भए जस्तै श्री’मति गौरी भारतकै ठूलो इन्टेरियर डिजाइनर हुन् । उनले मुकेश अम्बानी, रोबर्टो काभाली र राल्फ लाउरेन जस्ता हस्तीको घर डि’जाइन गरिसकेकी छन् ।
यो पनि, फ्यान’ले दिए राखीलाई महङ्गो मोवाइल फोन, बदलामा उनले दिइन् चुम्बन मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री तथा मोडल राखी सावन्तलाई एक फ्यानले महँगो मोवाइल फोन उप’हार दिएका छन् । उक्त फोन पाएर उनी निकै खुसी छन् । जुन खुसी उनले इस्टाग्राम एकाउन्टबाट भिडि’योसहित शेयर गरेकी छन् । फ्यानले गिफ्ट गरेको मोवाइल फोनको मूल्य ‘भारु’ डेढ लाख रुपैयाँको रहेको छ । गिफ्ट खो’ल्दा उनी निकै एक्साइटेट समेत देखिएकी छन् । गिफ्ट खोलेपछि उनले भनेकी छन् ‘यति ठुलो फोन क’सरी हुन्छ ? ।’
उनी’लाई उक्त गिफ्ट एक बच्चीले दिएकी हुन् । गिफ्ट खोलेपछि उनले उनको ती बच्चीको गालामा चुम्ब’न समेत गरेकी छन् । राखीको यो भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ । फ्यानले राखीलाई नयाँ फोनका लागि बधा’ई समेत दिएका छन् । हमेशा चर्चामा रहने अभिनेत्री राखी ‘बिग बास १४’ मा समेत दे’खिएकी थिइन् । यो सोमा सबैको मन जित्न सफल उनको शोका कार’णले फ्यान फ्लोइङ समेत बढेको थियो । इताजा खबरबाट
जाँदा-जाँदै रवी लामिछानेले भने: अन्तिम र मुख्य रिʼपोर्टमा नै कैचि लाइयो, देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु (भिडिʼयो हेर्नुहोस्)
January 22, 2021 admin समाचार 6051
५ सेप्टेम्बर सन् १९७४ मा भक्तपुरको बागे’श्वरीमा जन्मिएका रवि लामिछाने किशोरावस्थामै का’र्यक्रम चलाउँथे । दाजु हरिशरण लामिछाने रेडियो नेपालका समाचारवाचक हुनुले उनमा आवा&जको दुनियाँमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेको थियो । तर, उनी देशभित्र लामो समय
राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर, यसरी भयो भागरथी भट्टको अ’न्तिम सं’स्कार (भि’डियो सहित)
February 19, 2021 admin समाचार 6574
श’व फेला परेको १७ दिन पछि भागरथी भट्टको अन्त्य’टि गरिएको छ । उनलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढा’एर अन्त्य’ष्टि गरिएको छ । गत माघ २१ गते विद्यालय गएकी भागरथी २२ गते मृ ‘त अवस्थामा लवलेक सामुदायिक वनमा
January 20, 2021 admin समाचार 6362
कोरोनामा अर्को नयाँ लक्ष’ण देखापरे पछि अनुसन्धानकर्तालाई फेरी हैरानी थपिएको छ । चीनवाट सुरु भएको कोरोनाको प्र’भाव रोक्न खोप निर्माण नहुँदै फेरी अर्को नयाँ प्रकारको कोरोनाले प्रवे’श पाइसकेको छ । अहिले कोरोनाको फेरी नयाँ ल’क्षण